‘भैरे’ को कथा मन पर्‍यो अनि छाड्न सकिन : दयाहाङ राई – Medianp
‘भैरे’ को कथा मन पर्‍यो अनि छाड्न सकिन : दयाहाङ राई
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार २४, २०७५१९:३६0
काठमाण्डौ। जुनसुकै भूमिकामा फिट हुने कलाकार हुन् दयाहाङ राई । ‘लुट’ मा ‘गोफ्ले’ को भूमिका निर्वाह गरेपछि रातारात चम्किएका उनी अहिलेका सबैभन्दा व्यस्त कलाकारको लिस्टमा दरिन्छन् । महंगा अभिनेताको सूचीमा पनि उनी अग्रणी देखिन्छन् ।
गएको वर्ष महिनैपिच्छे नयाँ फिल्म लिएर हल छिरेका उनी यस वर्षका लागि दर्शकलाई फिल्म ‘भैरे’ पहिलो कोशेसी स्वरुप दिँदैछन्, जुन साउन ४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसमा उनी लिड रोलमा छन् ।
एभरेष्ट सूर्य बोहरा निर्देशित यस फिल्ममा दयाहाङ टाइटल क्यारेक्टरमा छन् । ‘लुट’ ले ‘गोफ्ले’ नामबाट परिचित गराएझैँ ‘भैरे’ ले पनि आफूलाई नयाँ परिचय दिनेमा उनी विश्वस्त छन् । उनी भन्छन्, ‘भैरे’ को कथा मन पर्‍यो अनि छाड्न सकिन । यो मेरो टाइपको फिल्म बनेको छ ।’
‘भैरे’ सोसल ड्रामा हो । पहिलादेखि जसरी फिल्महरु बनिरहेका थिए त्यसैको एक अवधारण हो । यो कुनै ठाउँ विशेषको कथा हो भन्ने छैन । नेपालभरीको एक प्रतिनिधि गाउँमा सुटिङ गरिएको छ, जुन मुस्ताङ र अपरमुस्ताङमा खिचिएको छ’, उनले भने ।
उनी ‘भैरे’ लाई पूर्ण कमर्शियल फिल्म भन्न चाहन्छन् । दर्शकलाई सोच्न विवश नबनाएपनि यस फिल्मले मनोरञ्जनको खुराक दिन नचुक्ने उनको दाबी छ ।
‘भैरे’ तपाईको करिअरको फरक फिल्म हो ? उनी भन्छन्, ‘त्यो त भन्दिनँ तर मेकिङको हिसाबबाट भने फरक भन्न सक्छु । निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहरा ‘मेन स्ट्रिम स्कूलिङ’ बाट आउनुभएको हो । उहाँले फिल्ममा त्यही स्कूलिङ फलो गर्नुभएको छ ।’
उनलाई फिल्मले राम्रो नतिजा ल्याउनेमा शंका छैन । यसमा दयाहाङको जोडी अभिनेत्री सुरक्षा पन्तसँग बाँधिएको छ । ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ र ‘सनम माया ला’को’ गीतले फिल्मको हाइप मेन्टेन गरिरहँदा ट्रेलरले पनि दर्शकमा फिल्मप्रति चासो जगाइरहेको छ ।
यो फिल्मको निर्मातामा प्रेम प्रसाद पौडेल र देवीमाया अधिकारी छन् । करुणाकर घिमिरे, सविता गुरुङ, यम बराल, सिन्धु पौडेल र कुमार बस्नेत फिल्मका सह-निर्मातामा छन् ।
सूर्य थोक्करको द्वन्द्व रहेको यस फिल्ममा वर्षा सिवाकोटी, बुद्धि तामाङ्ग, विक्रान्त बस्नेत, सुनिल थापा, अनुभव रेग्मी, कञ्चन ठकुरी, अंकित पौडेल, सयाहाङ राई, जान्वी बोहरा, जयनन्द लामा, सुरविर पण्डित, अर्जुन गुरुङ लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ ।
बाजुरामा रुखले च्यापिएर एकजनाको मृत्यु
‘मिस सुपर मोडल ग्लोव–२०१९’ मा नेपालकी अदिती अधिकारीलाई दुईवटा उपाधि
भोलीदेखि २५०० बढि स्क्रिनमा प्रदर्शनमा आउन लागेको टोटल धमालले पहिलो दिन १३ करोड कमाउने अनुमान
माल्भिकाको ‘जीवन साथी’मा मधुसंग रोमान्टिक बन्दै राजेश हमाल | लाजले भुतुक्कै भइन मधु (भिडियो)
जानी नजानी : क्यारेक्टर पोस्टर रिलिज
गलत फेनस गरेको भन्दै नेहा कक्कडलाई बनाइयो ट्रोल ! सामाजिक सञ्जालमा आयो भद्दा र अश्लिल कमेन्ट !